The Ab Presents Nepal » ३८ किलो सुनकाण्डमा मुछिएका दीपक मलहोत्रा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै कम्बोडिया र भियतनाम भ्रमणमा!
३८ किलो सुनकाण्डमा मुछिएका दीपक मलहोत्रा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै कम्बोडिया र भियतनाम भ्रमणमा!
काठमाडौं-: सुन र मोबाइल व्यापारी दीपक मलहोत्रा यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगै भियतनाम भ्रमणमा छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको विदेश भ्रमण टोलीमा मलहोत्राको नाम छुट्दैन । प्रधानमन्त्री ओली गत वर्ष चीन भ्रमणमा जाँदा पनि मलहोत्रा भ्रमण दलमै समावेश थिए । तत्कालीन एमालेलाई चुनावमा लागेको खर्चको अधिकांश हिस्सा मलहोत्राले नै बेहोरेको बताइन्छ । सोही कारण उनी नेकपाको अहिलेको सरकारमा निकै बलिया देखिएका छन् ।
‘भियतनाममा आइतबार भएको बौद्ध सम्मेलनमा मलहोत्रा दौरा सुरुवाल र ढाकाटोपी लगाएर सहभागी ‘भएका छन् ‘।त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भएको ३३ किलो सुन गायब र ३८’ किलो सुन तस्करी काण्डमा दीपक मलहोत्राको नाम पनि ‘छानविन समितिले उल्लेख गरेको थियो । मलहोत्राको नाम मुछिएलगत्तै प्रधानमन्त्री ‘ओलीकै आग्रहमा सुन तस्करी काण्ड सामसुम पारिएको ‘नेकपाका नेताहरू नै बताउँछन् ।
विगतमा मलहोत्रा नेपाली चलचित्र निर्माणमा संलग्न थिए ।’ उनले “चाहना” चलचित्रमा लगानी गरेका थिए । त्यसलगत्तै उनी तत्कालीन एमाले नेता वामदेव गौतमको सम्पर्कमा आए ।’ गौतम पहिलोपटक गृहमन्त्री भएका बेला मलहोत्राको सुन व्यापार खुबै फस्टाएको जानकारहरू बताउँछन् ।सुन व्यापार सँगसँगै मलहोत्राले मोबाइलको व्यापार व्यवसाय पनि सुरु गरे । सामसुङ मोबाइल कम्पनीको नेपाल एजेन्ट मलहोत्रा नै हुन् । सामसुङ मोबाइल बिक्रीबाटै वार्षिक उनले करोडौं कमाउने गरेका छन् ‘।